Maamulka Dooxada Shabeele oo saacado ka mid ah xalay gacanta ku hayay Baladweyne – SBC
Maamulka Dooxada Shabeele oo saacado ka mid ah xalay gacanta ku hayay Baladweyne
Ka dib dagaal xalay ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa mudo saacado ah kula wareegay gacan ku heynta magaaladaas ciidamo ka tirsan kuwa maamulka dooxada shabeele ee aagaasi ka dagaalka kula jira xarakada Alshabaab.
Dagaal xoogleh ayaa ku dhexmaray gudaha magaalada labada dhinac waa ciidamada Dooxada shabeele iyo Xarakada Alshabaab, waxaana mudo yar ka dib ay suurto Gashay in ciidamada xarakada Alshabaab lagala wareego gacan ku heynta magaalada Baladweyne .
Mudo saacado ah ayay magaalada Baladweyne gacanta ku hayeen ciidamada maamulka Dooxada Shabeele, waxayna intii ay ku sugnaayeen magaalada ay ooda ka qaadeen dad xarakada Alshabaab ugu xir xirnaa xabsiyada magaaladaas .
Waaga markii uu baryay ayaa waxaa dib uga ruqaansaday magaalada Ciidamada Maamulka Dooxada Shabeele iyagoona ku laabtay goobihii ay horay ugu sugnaayeen .
Ka dib waxaa dib ugu soo laabtay magaalada ciidamada Xarakada Alshabaab iyadoona dadka magaaladaas ay hadal hayeen wixii dhacay iyagoona isugu soo baxay wadooyinka, mana jiraan ilaa iyo hada wax khasaare la xaqiijin karo oo halkaasi ka dhacay .
Sikastaba ha ahaatee magaalada Baladweyne ayaa waxaa maanta laga dareemayaa xiisad kacsan iyo dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan xarakada Alshabaab kuwaas oo lagu wado in ay ugaga danleeyihiin in ay kaga jawaabaan weerarkii xalay lagu soo qaaday, lamana oga waxa dhici doona saacadaha soosocda.
Great post, incredible page layout, maintain the good work